IQualcomm Snapdragon 8150 idlula isithintelo se-360K kwi-AnTuTu | I-Androidsis
I-Qualcomm's Snapdragon 8150 idlula amanqaku angama-360K kwi-AnTuTu
Ukulandela ukumiliselwa kwakutsha nje kwe IHuawei Kirin 980, kunye nokuphunyezwa kwayo kwi Umlingane omtsha 20, Kuninzi okucingelwayo malunga ne-chipset elandelayo yeQualcomm, eya kukhuphisana nale, nge I-Samsung's Exynos 9820 kunye neApple yeA12 Bionic.
Ngeli thuba, ngaphambi kwesibhengezo esisemthethweni se-Snapdragon 8150 (i-Snapdragon 855), inqaku lomgangatho weprosesa livele kwi-Intanethi nge-AnTuTu. I-chipset ifumene amanqaku angama-362,292 kwi-benchmark eyaziwayo, iyenza i-SoC yokuqala ukubaleka kwiqonga le-Android eliwele i-benchmark ye-360,000, ngokunjalo neApple, nangona kujongano lwabo.
Xa kuthelekiswa, izixhobo zothotho lweHuawei Mate 20, ezisebenza kwi-chipset ye-Kirin 980, zikwazile ukufumana amanqaku aphakathi kwe-311,840, ngelixa i-smartphone Xiaomi Shark omnyama uHelo Inamanqaku aphezulu okwangoku ngesixhobo esisebenza ngamandla seQualcomm Snapdragon 845, esingamanqaku angama-301,757. (Fumanisa: Ezona Phones zinamandla zi-10 zika-Okthobha u-2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark).
Ngokusekwe kwiziphumo, kubonakala ngathi I-Snapdragon 8150 ibonelela ngeepesenti ezili-16 ngokusebenza okungcono xa kuthelekiswa ne-Huawei Kirin 980 kunye neepesenti ezingama-20 zokusebenza okungcono kunangaphambili, i-Snapdragon 845. Inqaku le-Snapdragon 8150 linokunyuka emva kwexesha lokucwangciswa ngabavelisi.
IQualcomm Snapdragon 8150 kulindeleke ukuba ize noyilo olusisiseko lweqela le-CPU, efanayo neKirin 980 kunye ne-Samsung's Exynos 9820. Inokubonisa ukusebenza okuphezulu kokusebenza kwisantya sewotshi ye-2.84 GHz, ii-cores ezintathu eziphakathi ezivaliweyo kwi-2.4 GHz, kunye neentsimbi ezine ezisebenza ngokulingene kwi-1.78 GHz. ingapakisha iAndreno 640 GPU, ekuthiwa inikezela nge-20% yokusebenza okungcono xa kuthelekiswa ne-Adreno 630.
Kukwalindelwe ukuba chipset iyakwenziwa kusetyenziswa inkqubo entsha ye-7nm yi-TSMC kwaye ubungakanani bokufa buya kuba yi-12,4 x 12,4mm. Ngelixa izokwaziswa kwinyanga ezayo, izixhobo ezithwele i-Snapdragon 8150 kulindeleke ukuba zibekho iyafumaneka kwisiqingatha sokuqala se-2019. IMeizu inokuba yeyokuqala ukuyixhobisa kwenye yeefowuni zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Qualcomm's Snapdragon 8150 idlula amanqaku angama-360K kwi-AnTuTu
UMIDIGI uza kungena kwimakethi yaseLatin American ngoLwesihlanu oMnyama ozayo
Imbeko yayiyeyona ntengiso yeTshayina yathengisa kakhulu ngeSmart brand